FBC - Dogongora raawwatameef mootummaa fi dhaabni naannicha bulchu dhiifama gaafata -Abdii Mahaammad Umar
Traampii fi Puutiin mari'atan
Daawwin hojii preezdaant Isaayyaas Afawarqii milkaa'aa ture- muummee ministiraa Dr Abiy Ahimad
Koomishiniin daawwin Preezdaant Isaayyaas nagaan akka xumuramuuf qaamni nageenya hirmaannaa taasisaniif galateeffate
Naannoleen Oromiyaa fi Somaalee Itiyoophiyaa iddoowwan wal-daangessanitti qaamoleen nageenyaa Federaalaa seenanii hojii tasgabbeessuu akka hojjatan waliigalan
Shugguxiin 53 to'atame
Dogongora raawwatameef mootummaa fi dhaabni naannicha bulchu dhiifama gaafata -Abdii Mahaammad Umar
Finfinnee, Adoolessa 5,2010(FBC) -Dogongora ummatarratti raawwatameef, mootummaa fi dhaabni naannicha gaggeessu Paartin Demokraasummaa Somaalee Ityoophiyaa itti gaafatama akka fudhatu preezdaantiin naannoo Somaalee Ityoophiyaa Abdii Mahaammad Umar ibsan.
Preezdaantichi kana kan jedhan walga'ii idilee mana maree naannichaa kaleessa eegalamerratti.
Preezdaantichi jijjiirrama muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad guyyoota 100 keessatti galmeessisan ilaalchisee mana marichaaf ibsa laataniiru.
Preezdaantin naannichaa karoorri muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad; ida'amuu, dhiifamaa fi jaalalli sadarkaa koree hoji raawwachiistuu paartichaatti guutummaan fudhatamuu ibsanii, hojiirra oolmaa isaatifis kan hojjetamu ta'uu eeraniiru.
Addi Bilisummaa Biyyoolessaa Ogaadeen akkaataa Manni Maree Bakka Bu'oota Ummataa moggaasa shororkummaa irraa kaasen, gara biyyaa deebi'ee sochii siyaasa nagayaatti akka makamu ni hojjenna jedhaniiru.
Paartii fi mootummaan naannoo Somaalee Ityoophiyaa bulchaa jiru yaada araaraa, dhiifama, jaalalaa fi ida'amuu Dooktar Abiy fudhachuun, rakkoo amma ammaatti mudateef ummata dhiifama gaafanna jedhaniiru.
Yaa'iin mana marichaa har'as itti fufeet kan gaggeeffamu ta'uu Tajaajilli Oduu Ityoophiyaa gabaasera.
Oduuwwan Biroo « Beenishaanguul Guumzitti rakkoo mudatee tureen namoonni shakkaman mana murtii dhiyaatan	Naannon Somaalee sirreeffamtoota 150 gadhiise »
Sharafni alaa hedduminaan biyya galaa jiraachuu muummee ministiraa Dooktar Abiy ibsan